Boqortooyada Midowday (UK) si loo tirtiro baaritaannada PCR -ga ee khasabka ah ee socdaalayaasha la tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Boqortooyada Midowday (UK) si loo tirtiro baaritaannada PCR -ga ee khasabka ah ee socdaalayaasha la tallaalay
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Nidaamka tijaabinta PCR wuxuu cadeeyay wax aan macquul ahayn, qaali ah isla markaana ah qodobka ugu weyn ee wax ku biiriyay dib -u -dhaca weyn ee xuduudaha. Waxa kale oo mararka qaarkood aan macquul ahayn.
Boqortooyada Midowday (UK) si ay u joojiso baaritaannada PCR ee socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay.
ETOA waxay ammaanaysaa tallaabada saraakiisha UK ay ku soo afjarayaan waajibaadka baaritaanka PCR,
Ka saarida shuruudaha looga baahan yahay tallaalka laba jeer waa “aad loo soo dhaweeyo”.
Iyada oo la isla dhexmarayo ka -qaadista baaritaannada PCR -ga ee khasabka ah ee dadka imanaya tallaalka ee UK Tom Jenkins, Maamulaha ETOA, ayaa sameeyey faallooyinka soo socda:
“Nidaamka imtixaanka PCR wuxuu cadeeyay wax aan macquul ahayn, qaali ah oo qeyb weyn ka ah dib -u -dhaca weyn ee xuduudaha. Waxa kale oo mararka qaarkood aan macquul ahayn. Qof kasta oo ka dhoofaya Boqortooyada Midowday wax ka yar 36 saacadood waa inuu qaataa imtixaanka “imaanshaha ka hor” ee UK, si loo caddeeyo inay nabad qabaan inay ku soo noqdaan UK. Sidaa darteed ka -qaadisteeda kuwa la tallaalay labadoodaba waa soo -dhoweyn.
Tom Jenkins, agaasimaha guud ee ETOA
“Laakiin waxaa muhiim ah in nasashadaan la gaarsiiyo dhammaan booqdayaasha laba jeer la tallaalo, ma aha oo kaliya Ingiriiska. The UK ayaa si wax ku ool ah uga go'day booqdayaasha soo galaya waxayna sababtay inay dib uga dhacday dhammaan meelaha kale ee Yurub. In kasta oo wershadda dalxiiska ee soo galaysa £ 30 bilyan ay la kulantay khasaare ku dhowaad labadii sano ee la soo dhaafay, waxaan si degdeg ah ugu baahannahay inaan dayactirno muuqaalkeenna oo ah meel soo dhaweyn iyo toos ah oo aan ku booqanno. Dib -u -dhaca dheeraadka ah, ayaa sii baahaya dhaawaca soo gaadhaya dhaqaalaha UK. ”
Waqtigan xaadirka ah, si uu u galo UK, qofka socotada ah waa inuu haystaa caddeyn tijaabo COVID-19 ah oo taban oo laga helay gegida dayuuradaha ee aad ka dhoofayso, oo lagu qaaday 3 maalmood gudahood markii aad u duushay England. Imtixaanku waa inuu buuxiyaa xeerarka iyo halbeegyada ay qeexday Dawladda UK.
ETOA (Ururka dalxiiska Yurub) waa ururka ganacsiga ee hawl wadeennada dalxiiska iyo alaab -qeybiyeyaasha meelaha yurub, laga bilaabo magacyada caalamiga ah ilaa meheradaha madaxa bannaan ee maxalliga ah.